नयाँ पुस्ताले आफूहरुलाई विस्थापित गर्छन् भनेर चुनाव हुन दिएनन् : पुनम भट्ट::Nepali News Portal from Nepal
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहतका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठनलाई फागुन १४ मा निर्वाचित गर्नु÷गराउन मिति तोकेको थियो । फागुन १४ मा हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) निर्वाचनको मिति टरेको बताइएको छ ।
चुनाव हुने या नहुने संशयको बीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चुनावको मिति तोकीरहँदा अनेक अड्कलबाजी पनि भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको मिति सर्नुले पनि चुनाव नहुने हो कि ? जस्तो भान पनि हुन्छ ।
विद्यार्थी संगठनहरु आफै भागबन्डामा नमिलिरहँदा चुनाव हुन्छ÷हुँदैन भनेर शंका गर्नु स्वभाविक पनि लाग्छ । विश्वविद्यालयमा हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव र नेबी संघ चुनाव वरिपरी रहेर हाम्रा संवाददाता श्याम राना मगरले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ(नेवि संघ)का निर्वतमान सदस्य पुनम भट्टसंग गरेको कुराकानीको अंश
तपाईंहरु समिति बिहिन बनेको पनि थुप्रो समय भइसक्यो । अबको चुनावमा तपाईंहरु भाग लिने कि नलिने ?
चुनाव गराउँनकै लागि हामीले तदर्थ समिति गठन गर्दै छौं । इलेक्सन गराउँनकै लागि हामीले तदर्थ समिति बनाउँदै छौं । अध्यक्ष सहित ७ वटा महामन्त्री, उपाध्यक्ष मनोनित भई सक्नु भयो । बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ । यो कमिटीले ६ महिनापछि महाधिवेशन गराउँने भन्ने सहमति भएको छ ।
चुनाव नहुँदा के कस्ता असर परेका छन् ?
एउटा प्रजातान्त्रिक संस्था हो कांग्रेस । चुनाव नहुँदा अभियस्लि हामी जस्तो प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने विद्यार्थी नेताहरुलाई अवश्य पनि असर परेको छ । हामी संगठन र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानसहित संगठनमा लाग्यौं ।
त्यसको लागि हामीले समय पनि दिन्छौं । जीवनको महत्वपूर्ण कुरा भनेकै समय हो । पैसा भन्दा पनि पहिला समय हो । त्यो समय हामीले संगठनलाई दिँदै गर्दा संगठनले चुनाव नगर्दा नेतृत्व विकास त पक्कै पनि हुँदैन ।
नेतृत्व विकास नभई सकेपछि मान्छेले आकांक्षा राखेको पद प्राप्त हुँदैन । त्यस कारण नेतृत्वमा आउँन पनि सकिदैन । संगठनमा लागेकै कारण आफ्नो पढाएई, करिअरलाई समय नदिँदा यताको भविष्य पनि अन्धकार भयो । संगठनमा लागेर नेतृत्वमा अघि बढ्न नसक्दा असर त पर्छ नै । अहिलेको युवा पुस्तामा यसको नराम्रो असर परेको छ ।
यतातिर हामीले पढाई पनि राजनीति गर्ने भनेर राम्रो संग पढी रहेको हुँदैन । जागिर खान पनि कोसिस गरेका हुँदैनौं । लोकसेवा लड्नेदेखि विदेश जान हामीले कोसिस गरेका हुँदैनौं । राजनीति गर्ने भनेर हामी कुनै व्यवसायम पनि आवद्ध भएका हुँदैनौं । चुनाव नभई दिँदा पद पनि प्राप्त नहुने यता अर्को कुनै व्यवसाय पनि नहुँदा हामी दुबै तिरबाट अलमलिएका छौं । अन्धकारमय भविष्य संगठनमा लागेका युवाहरुको हुन सक्छ । कतिको भयो पनि । १०÷१२ वर्षपछि चुनाव भई रहेको हुन्छ ।
धेरै मान्छे त पदमा स्थापित भए । राजनीतिमा स्थापित भए । समाजमा स्थापित भए । तर, पहिलेका धेरै युवाहरुको अवस्था कमजोर बन्यो भने, अबका दिनम युवाहरुको अवस्थामा झन धेरै असर पर्छ । झने गाह्रो होला जस्तो छ । जसले नेवि संघमा आफ्नो राजनीतिक करियर देखि रहेका छन् ।
तपाईंहरुको भागबण्डा नमिलेर चुनाव नभएको पो हो कि ?
चुनाव नहुनुका धेरै कारण छन् । आन्तरिक कारण । बाहिरबाट हेर्दा भागबण्डा नमिलेको जस्तो पनि देखियो ।
हामीभन्दा अघिल्लो नेतृत्वको बुझाई यस्तो पनि छ, अबको पुस्ता हामीभन्दा ट्यालेन्ट आउँछ भनेर पो चुनाव नगराएको हो कि ? त्यस्तो पनि छ । उनीहरुको क्षमताले हामीलाई खाइदिन्छन् कि भन्ने हिसाबले भित्रभित्रे जालझेल रँचेर इलेक्सन हुन नदिएका हो कि भन्ने अवस्था पनि छ ।
ठ्याक्कै यही कारण चुनाव भएन भनेर त हामीले पनि आँकलन गर्न सक्दैनौं । हामी पनि विद्यार्थी नेता भएको नाताले चुनाव होस् भन्ने चाहन्छौं ।
तर, माथि स्थापित भई सकेको नेतृत्वले किन चुनाव गराउँन चाहँदैनन् । ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
पार्टीको निकटकै कारण विद्यार्थीको हक हितको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरु नबोलेको पनि कहिलेकाही देखिन्छ । विद्यार्थी निकट संगठन पार्टीका लागि लड्ने हो कि विद्यार्थीका लागि ? यसमा तपाईंको के भनाई छ ?
विद्यार्थी संगठन चाहे नेवि संघ होस्, चाहे अनेरास्ववियु । पहिलो त विद्यार्थीको हक हितका लागि लड्न स्थापित भएका हुन् ।
दोस्रो विद्यार्थी संगठनले समाज परिवर्तनको लागि हामी भन्दा पनि सत्तामा भएका व्यक्तिहरुले गलत गर्दै गर्दा, विद्यार्थी भनेको त सचेत नागरिक हो । त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँनु पनि विद्यार्थी संघको काम हो । चेतावनी दिनु हो ।
नेवि संघको कुरा गर्नुहुन्छ भने, जुन सर्व सत्ताबाद थियो । तिनीहरु विरुद्ध कांग्रेसले लडाई लडि रहेको बेलामा सहयोग गर्न । यो देशमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता स्थापना गराउँन कांग्रेसलाई सहयोग गर्न कांग्रेसको भातृ संगठन नेवि संघ स्थापना भएको हो । त्यसकारण, पहिलो विद्यार्थी हक हितका लागि लड्न ।
दोस्रो समाजका विकृति हटाउँन, सत्ताका विरुद्ध विचार राख्न, आन्दोलन गर्न पनि विद्यार्थी संगठन जन्मिएको हो ।
चुनाव होला त ?
बल्ल त एक वर्षपछि अध्यक्ष महामन्त्री सहित तदर्थ समिति गठन भएको छ । अझै केन्द्रि कमिटि बन्न बाँकी छ । ६ महिनाको लागि भनेर सहमति भएको छ । तर, ६ महिना भित्रमा अहिलेको तदर्थ समितिले महाधिवेशन आयोजना गर्ला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
विगतको पद्धति हेर्दा पनि । हामीले विधि र विधानलाई हेर्ने हो भने उहाँहरुले ६ महिना भित्र इलेक्सन हुन्छ । तर, हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
संघ र प्रदेश सरकार केन्द्रिकृत मानसिकतामा छन : प्रवक्ता उचै
मान्छेले जागिर हैन कि जागिरले मान्छे खोज्ने विषय हो, सिए : सिए अमित थापा